Soo dejisan Adobe Creative Cloud 5.2.0.436 – Vessoft
WindowsNidaamkaKordhintaAdobe Creative Cloud
Bogga rasmiga ah: Adobe Creative Cloud
Adobe Creative Cloud – software ah inaad kala soo baxdo iyo casriyeyn Chine ka shirkadda caanka ah Adobe. Barnaamijku wuxuu u saamaxaaya in ay dagsado, sida Adobe Photoshop, Adobe muujiye, Adobe Xulashada, Adobe ka dib Dhibaatooyinka, Adobe Photoshop Lightroom iwm Adobe Creative Cloud kuu ogolaanaya in aad kala soo bixi far ka Typekit, baadhaan ama post mashaariic on Behance iyo isticmaalista adeegyada daruur. Software-ka waxa ay interface fudud oo dareen leh.
Updates loading iyo software Easy ka Adobe
Downloads far ka Typekit
Publication ama raadinaya mashaariicda on Behance
Soo dejisan Adobe Creative Cloud
Adobe Photoshop – softiweer awood u leh nooc kasta oo tafatir muuqaal ah iyo naqshadeyn websaydh oo leh qalab aad u wanaagsan oo kaladuwan.
Faallo ku saabsan Adobe Creative Cloud
Adobe Creative Cloud Xirfadaha la xiriira
Tani waa adeeg yar oo bixiya difaac ka dhan ah qalabyada aan loo baahnayn sida qalabka kala duwan, adware ama spyware.
iSkysoft Video Converter – oo ah qalab loogu badalo faylasha caanka ka ah qaab qaab kale. Softiweerku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si aad u habbeysato tayada beddelaadda oo aad uga soo degsato fiidiyowyada adeegyada caanka ah.
Tani waa software kaabis ah oo loogu talagalay fududeynta isticmaalka kombiyuutarka naafada loogu talagalay dadka naafada ah.